Breakig News: Xerada Ifo oo Xalay Lagu Dilay Cabdirisaaq Tiibaa – Rasaasa News
Aug 19, 2011 ethiopia, Jwxo-shiil, Ogaden, ONLF, Tiibaa oo Xalay Lagu Dilay
Breaking News: Garrisa, Aug 19, 2011 [ras] – War deg deg ah oo aanu saaka ka helay magaalada Garrisa ee dalka Kenya ayaa sheegaya in dabley aan la garanayn ay xalay ku dileen xerada Qaxootiga ee Ifo Marxuun Cabdirisaaq Tiibaa.
Tiibaa waxaa uu ka tirsanaan jiray golaha dhexe ee kooxda Jwxo-shiil, waxaana uu ka mid ahaa dadka kooxda uga hawlgala Bariga Afrika. Muddo sanad ah ayuuna ka hawl galayey Bariga Afrika isaga oo ka yimid dalka Maraykanka oo uu dhalashadiisa haysto.
Hore waxaa dalka Kenya uga dhacay dilal is daba joog ah oo lagu eedeeyo in ay ka dambayso kooxda Jwxo-shiil. Lama ogga in dilka xalay ka dhacay xerada Iffo ay ka dambaysay Kooxda Jwxo-shiil iyo in kale.
Tiibaa, ayaa maanta lagu xabaalayaa xerada Qaxootiga ee Iffo, wixii ka soo kordha dilkiisa waan idinla soo socodsiin doonaa.
Xubno Xilal Sare ka Soo Qabtay Degaanka Somalida Ethiopia oo ku Biiray ONLF